सो–हश्राद्ध ः कुन तिथिमा कतिखेर गर्ने ? | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home समाचार स्थानीय सो–हश्राद्ध ः कुन तिथिमा कतिखेर गर्ने ?
सो–हश्राद्ध ः कुन तिथिमा कतिखेर गर्ने ?
काठमाडौं, १६ भदौ/रासस
प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा दिवङ्गत पितृका नाममा गरिने सो–हश्राद्धका लागि आवश्यक पर्ने अपराह्नकालको समय निर्धारण गरिएको छ।
धर्मशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थमा सो–हश्राद्ध अपराह्नकालमा गर्नु भन्ने वचन अनुसार पञ्चाङ्गकार एवं तोयनाथ पन्तको पात्रोका सम्पादक सूर्यनाथ पन्तले १६ वटै तिथिको समय निकालेका छन्। पितृ पक्षसमेत भनिने सो–हश्राद्ध यस वर्ष भदौ १७ गते बुधवारदेखि शुरू हुँदैछ।
बुधवार प्रतिपदा तिथिको श्राद्ध दिउँसो १ः१७ बजेदेखि ३ः४९ सम्ममा पिण्डदान गर्ने गरी निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए। यो समयभित्रमैं पिण्डदान गर्नुपर्नेछ। तर्पण, दियो पूजा, विश्वेदेवा ब्राह्मणलगायत पूजा तोकिएको समयअघि नै गर्न सकिनेछ। यो समयमा पिण्डदान नगरे पितृले पाउँदैनन् भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले बताए।
भदौ १८ गते बिहीवार द्वितीया तिथि श्राद्ध दिउँसो १ः१७ देखि ३ः४८ सम्म दिइएको छ। भदौ १९ गते तृतीया तिथि श्राद्धको समय पनि १ः१७ देखि ३ः४८ सम्म छ। यस वर्ष भदौ २० गते शनिवार कुनै पनि तिथिको श्राद्ध नहुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृति दिएका पञ्चाङ्ग (पात्रो)मा उल्लेख छ। चतुर्थी तिथि श्राद्धको समय भदौ २१ गते आइतवार दिउँसो १ः१६ देखि ३ः४६ सम्म गर्नुपर्नेछ।
पञ्चमी तिथि श्राद्ध भदौ २२ गते सोमवार पनि दिउँसो १ः१६ देखि ३ः४६ सम्ममा गर्नुपर्नेछ। षष्ठी तिथि श्राद्ध भदौ २३ गते मङ्गलवार १ः१५ देखि ३ः४५ सम्ममा गर्नुपर्नेछ। सप्तमी तिथि श्राद्ध भदौ २४ गते बुधवार १ः१५ देखि ३ः४४ सम्ममा गर्नुपर्नेछ। अष्टमी तिथि श्राद्ध भदौ २५ गते बिहीवार दिउँसो १ः१४ देखि ३ः४३ सम्ममा गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधि छ।
नवमी तिथि श्राद्ध भदौ २६ गते शुक्रवार दिउँसो १ः१३ देखि ३ः४२ सम्ममा गर्नुपर्नेछ। दशमी तिथि श्राद्ध भदौ २७ गते शनिवार १ः१३ देखि ३ः४१ सम्ममा गर्नुपर्नेछ। एकादशी श्राद्ध भदौ २८ गते आइतवार १ः१२ देखि ३ः४० सम्ममा गर्नुपर्ने जनाइएको छ। द्वादशी तिथि श्राद्ध भदौ २९ गते सोमवार पनि १ः१२ देखि ३ः४० सम्ममा गर्नुपर्नेछ। त्रयोदशी तिथि श्राद्ध भदौ ३० गते मङ्गलवार १ः११ देखि ३ः३८ सम्ममा गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, चतुर्दशी तिथि श्राद्ध भदौ ३१ गते बुधवार पनि १ः११ देखि ३ः३८ सम्ममा गरिसक्नुपर्ने सम्पादक पन्तले बताए। औंसी तिथि श्राद्ध असोज १ गते बिहीवार दिउँसो १ः१० देखि ३ः३७ सम्ममा गरिसक्नुपर्नेछ। अपराह्नकाल पारेर पिण्डदान नगरेमा श्राद्ध गरेर पाइने फल पाउन नसकिने शास्त्रीय प्रमाण छ।
यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण सो–हश्राद्ध गराउने ब्राह्मण यजमानकहाँ जान कठिन छ। आवतजावत गर्दा कोरोना फैलन सक्ने चिन्ता छ। केही स्थानीय तहले श्राद्ध विद्युतीयरूपमा गर्न, घरमा पुरोहित नबोलाउन भनी सार्वजनिकरूपमा सूचनासमेत जारी गरेका छन्। कुनै कारणवश श्राद्ध रोकिंदा शास्त्रमा अनेक विकल्प दिइएका छन्। सो–हश्राद्ध कर्ताले आफ्ना पिताको तिथिमा गर्नुपर्ने विधान छ। आपत् धर्म अनुसार कुनै कारणवश अड्किएमा आश्विन कृष्ण औंसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्न हुने शास्त्रीय वचन रहेको धर्मशास्त्रविद् गौतमले बताए।
यस वर्ष असोज महीनाभर अधिकमास भएकाले आश्विन शुक्लपञ्चमी कात्तिक ५ गते बुधवार पर्छ। भदौको पितृपक्ष अर्थात् सो–हश्राद्धमा कोरोनाकै कारण श्राद्ध गर्न नसक्नेले कात्तिक १ देखि ५ गतेसम्म पनि गर्न शास्त्रसम्मत हुने उनले सुनाए।
यो समयमा पनि कारणवश सो–हश्राद्ध गर्न नसकिएमा कार्तिककृष्ण औंसी अर्थात् लक्ष्मीपूजाका दिन गर्न सकिन्छ। कार्तिककृष्ण औंसीमा पनि गर्न नसकिने भएमा वृश्चिक सङ्क्रान्ति अर्थात् मङ्सिरसम्म जुराएर गर्न सकिने शास्त्रीय मत छ। यो विकल्प अहिले कोरोनाका कारण सिर्जना भएको जस्तै परिस्थितिका लागि दिइएको हो।
चाडपर्व यज्ञयागादि तथा ठूला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्रद्धा, भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार सो–हश्राद्ध गर्ने गरिएको हो। दशैं, तिहारजस्ता सनातन धर्मावलम्बीले मनाउने ठूला पर्वअघि श्रद्धा, भक्तिका साथ दिवङ्गत पितृलाई सम्झन सो–हश्राद्ध गर्न थालिएको हो। यस समयमा पितृले आस गरिबसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ।
Previous articleकोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सिराहामा ७ पुग्यो
Next articleप्रदेश २ का ५९ हजार किसानलाई अनुदान